Myitter - Page 326 of 342 - Media and Entertainment
“ငွေတိုးယူပြီး ဆေးမကုပါနဲ့ဗျာ…ဆေးရုံကြီးသာရောက်အောင်လာခဲ့ပါ ကူညီပါ့မယ်” ဆိုတဲ့ လူငယ်လေး
July 28, 2019 Myitter 0
“ငွေတိုးယူပြီး ဆေးမကုပါနဲ့ဗျာ…ဆေးရုံကြီးသာရောက်အောင်လာခဲ့ပါ ကူညီပါ့မယ်” ဆိုတဲ့ လူငယ်လေး မုံရွာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး မှာ ဆေးရုံ တက်ရင်း ဆေးဖိုးအတွက် ငွေကြေးအခက်ခဲဖြစ်နေလားကျွန်တော့်ဆီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ စီစစ်ပြီး တကယ် နွမ်းပါးလူနာဖြစ်ပါက ရေချမ်း ဆေးဆိုင်မှာ ဘေ ဖွင့်ပေးပြီး လူနာရေးရုံဆင်းသည်အထိ တာဝန်ယူပေးပါမယ်ခဗျာလက်ရှိ ကူညီပေးနေတဲ့ လူနာနှစ်ယောက်ကတော့ဆေးရုံဆင်းသွားကြပါပြီ။ လူနာနှစိဦးအတွက် စုစုပေါင်းဆေးဖိုး […]
သမီးဖြစ်သူကို အတန်းကြီးကျောင်းသားတစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာကို ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့သည့် ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးယူပေးရန် မိခင်ဖြစ်သူ တိုင်ကြား
July 27, 2019 Myitter 0
သမီးဖြစ်သူကို အတန်းကြီးကျောင်းသားတစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့မှုအား ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့သည့် ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးယူပေးရန် မိခင်ဖြစ်သူ တိုင်ကြား Saturday, July 27, 2019 သမီးဖြစ်သူကို ကျောင်းမှာ အတန်းကြီးကျောင်းသားတစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စကို ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေက မိမိအား အသိမပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူပေးပါရန် […]
လျော့ကျနေသည့် ဓာတ်ကြိုးကို တိုက်မိသည့် ဆိုင်ကယ်စီးသူ ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
လျော့ကျနေသည့် ဓာတ်ကြိုးကို တိုက်မိသည့် ဆိုင်ကယ်စီးသူ ဓာတ်လိုက်သေဆုံး Saturday, July 27, 2019 မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၂၃လမ်း၊ ၅၉လမ်းနှင့် လမ်း ၆၀ ကြား ရေစစ်ကန်အနီးတွင် ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက် ညပိုင်းအချိန်က လမ်းပေါ်တွင် လျော့ကျနေသည့် ဓာတ်ကြိုးကို တိုက်မိသည့် […]
အိမ်မှာတော့ ချက်စားနေတဲ့ဆန်ပုံးထဲမှာ ချင်း( ဂျင်း ) တက်လေးတစ်တက် ထည့်ထားလို
#တုတ်ကွေး အခုချိန်ခါက တုတ်ကွေးရာသီလို့ပြောရမလား။ တော်တော်များများ ဖျားနေတာတွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ ဖြစ်တာ ပိုများနေတယ်။ ပြီးတော့ တုတ်ကွေးဆိုတာ ဖြစ်လာမှ ဆေးကုတော့လည်း ချက်ချင်းမပျောက်တတ်ဘူးဗျ။ ဒါဆိုကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရနိုင်သလား? ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော့ ချက်စားနေတဲ့ဆန်ပုံးထဲမှာ ချင်း( ဂျင်း ) တက်လေးတစ်တက် ထည့်ထားလိုက်တာပါပဲ။ […]
ဗစ်​တိုးရီးယားနဲ့ အခြားက​လေး​တွေကို နစ်​နာ​အောင်​ ​ပြော​နေတဲ့ သက်​ထွဋ်​​အောင်ဆိုတာ ကိုပြောပြလိုက်တဲ့ အိပန်ဆယ်လို
ဗစ်​တိုးရီးယားနဲ့ အခြားက​လေး​တွေကို နစ်​နာ​အောင်​ ​ပြော​နေတဲ့ သက်​ထွဋ်​​အောင်ဆိုတာ Victoria လေးရဲ့ ပုံကို ဖြန့်မယ် ခြိမ်းခြောက်ပြီး ကူညီနေသူ ဆရာသက္ကမိုးညိုရဲ့ သမီးလေးရဲ့ ပုံကိုတင်၊ ဒုတိယVictoria ဖြစ်လာမယ့် ကလေးဆိုပြီး ရေးသား၊ Victoria လေးနဲ့ ကူညီနေသူတွေကို နစ်နာမယ့် အရေးအသားတွေ ဆက်တိုက်ရေးခဲ့တဲ့ Moe […]
မန္တလေးတိုင်း ချမ်းမြသာစည်က နေအိမ် ၉ လုံး အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ဖယ်ရှား၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ် ..
မန္တလေး-စစ်ကိုင်းလမ်းပေါ်ရှိ နေအိမ်အချို့ကို ကျူးကျော်ဟုဆိုကာ စည်ပင်က ဝင်ဖျက်၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်၍ ဒေသခံသုံးဦး ဖမ်းဆီးခံရ သတင်း၊ဓါတ်ပုံ – အမ်တီ မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ကန်တော်ကြီးအနီး စစ်ကိုင်း-မန္တလေးကားလမ်းပေါ်ရှိ နေအိမ်အချို့ကို ကျူးကျော်ဟုဆိုကာ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာမှ ဦးဆောင်သည့် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့မှ ယနေ့(ဇူလိုင်၂၇)နံနက် အစောပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ဦးပွားဂုံးကျော်အဆင်းလမ်းနှင့် […]
အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၂၀၀၀) ကျော်ကို အလှူဒါနပြုခဲ့သော အလှူရှင် ဇနီးမောင်နှံ
အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၂၀၀၀) ကျော်ကို အလှူဒါနပြုခဲ့သော အလှူရှင် ဇနီးမောင်နှံ မိုးကုတ်မြို့က စေတနာရှင် ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးဟာ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ အိမ်တွေကို စာရင်းကောက်ယူပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကျော်ကို ဆန်၊ဆီ၊ငါးသေတ္တာ၊ခေါက်ဆွဲခြောက် နှင့် ရေသန့်ဗူးတွေ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်….. ပထမနေ့ 25.4.2019 ရက်နေ့ မှာ […]
ယနေ့နှလုံးသားကိုရိုက်ခတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် သာဓုအကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မိပါသည်
ရေဘေးဒုက္ခကို အံတုပြီး မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေတဲ့ အံ့မင်းညိုတို့မိသားစုလေးရဲ့ ကြည့်နုးစရာ (ရုပ်/သံ)
« 1 … 325 326 327 … 342 »
မငျးရာဇာအိမျမှ အိမျဖျောမလေးရဲ့ သနားစရာအမှနျတရားမြား(ရုပျသံ)
မင်းရာဇာရဲ့အမှုက သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုဖြစ်လို့ အာမခံ မရနိုင်လို့ဆို ….
အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၄၅၀ ကို ဆန် အိတ်သေးတစ်အိတ်နှင့် ဆီ တစ်ဘူးစီ လှူဒါန်ုးလိုက်တဲ့ ” ဆန်ပွဲရုံပိုင်ရှင် ”…..
လူနာအမှတျ ၁၅ သူနာပွုဆရာမရဲ့ တောငျးဆိုခကျြလေးကို နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံကလိုကျလြောပေးလိုကျပါပွီ
သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာအမှုမှ ရှေ့နေကြီး ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ရဲ့ နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များ